Min 4.5 ilaa Qof iyo Cod (Yusuf Garaad: Maxaa ka dhallan kara in hab degmo wax lagu qeybsado?) | Caasimada Online
Home Maqaalo Min 4.5 ilaa Qof iyo Cod (Yusuf Garaad: Maxaa ka dhallan kara...
Min 4.5 ilaa Qof iyo Cod (Yusuf Garaad: Maxaa ka dhallan kara in hab degmo wax lagu qeybsado?)
Waxaa na kala geeyay dagaal sokeeye oo ujeeddo-badan ah, mararka qaarna uu ajnebi ka qeyb qaatay welina uu ku lug leeyahay. Marar badan ayaan koox diineed, qabiil ama qabaa’il isgaashaan buureystay oo dagaal ku lug leh waxaan weydiiyay sababta ay hubka u qaateen. Jawaabta ugu badan oo igu soo noqnoqotay waxay ahayd in ay ka dagaallamayaan caddaalad darro.
Xataa Dastuurka uu dalku ku dhisan yahay ee ku meel gaarka ah waxaa uu ku saleysan yahay kala shaki iyo is aamminaad la’aan haddana la rabo in la wada shaqeeyo. Bal eeg awoodaha Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha. Bal eeg awoodaha Federaalka iyo waxa uu Dastuurku u yaqaan Dowladaha xubnaha ka ah, laakiin dadku ugu yeero Dowlad Goboleedyo. Bal eeg xilalka Hoggaamiyayaasha Dowladaha Xubnaha ka ah Soomaaliya ay la baxeen Madaxweyne, oo eeg jagooyinka Wasiirrada ee heer Gobol iyo Guddoomiyayaasha Baarlamaannada. Bal eeg salaan qaadashada calammo aan la aqoon ay ka daba babbanayaan ee Madaxda Gobollada ee isbooqanaya, muusig loo garaacayo, oo salaanta ka qaadanaya ciidanka dowladda xubinta ka ah dowladda Soomaaliya. Bal eeg nidaamka 4.5 ee xilalka siyaasadda lagu qeybsanayo.
Waa run in degaan ka wanaagsan yahay qabiil. Nidaamka degaan ku saleysan waa mid ka sarreya kan haybta. Waa mid siyaasadda heer Qaran iyo midda heer degaan isku xireya oo Xildhibaan kasta ku xiriirinaya degaan ay tahay in uu ka warqabo baahidiisa, rabitaankiisa iyo aragtidiisa.
Haddii ay arrintu sidaa tahay, ma dhihi karnaa in Soomaaliya loo fekerayo? Mise waa mid leh reerkeyga sidan ayaa u roon iyo mid kale oo leh aniga reerkeyga sidani uma roona.
Sida cad tirada dadku degmo iyo degaan kuma xirna. Haddii Degmo lagu saleeyo kuraasta Baarlamaanka, waa wax khilaafsan mabda’a Dimuqraaddiyadda ee ah in ay dadka isku tira le’egba ay kuraas isu dhiganta ka helaan Baarlamaanka.
Waayo Degmooyinka lama tiro koobin, ismana tiro le’eka dadka degmooyinka ku nool. Degmooyinkeennu waa kuwo la sameeyay berigii xorriyadda la qaatay qaar kale oo bandanna uu Taliskii militerigu ku daray, kuwaas oo aan ka tarjumeyn tirada dadka ku nool degaan kasta hadda oo la joogo 2016. Magaalooyin badan oo ka dad badan Degmooyinka qaarkood ayaa sameysmay kuwaas oo aan degmooyin ahayn, Degmooyin hore u jireyna hoos ayay u dhaceen saami ahaan marka loo eego kororka tirada dadka Soomaaliya.
Nidaamka Degmooyinka haddii la raaco waxaa la rabaa in Hargeysa la yiraahdo waa Degmo oo waxay heleysaa 3 kursi ama saddex Xildhibaan ayaa ka soo baxaya.
Caddaalad darrada ay Somaliland sheegtay in ay ka goosatay iyo middaan hadda la rabo in la jideeyo yaa weyn?
Waa kuraas qabaa’il kale ay hadda ku fadhiyaan oo laga qaadan rabo iyada oo aan codeyn iyo doorasho xalaal ahi dhicin.
Markaa si kale haddii loo dhigo waxay noqoneysaa nidaamka hadda jira ee shaqeynaya aan beddelno. Aan ku beddelno mid noo kala badiya kuraasta Baarlamaanka. Aan ku beddelno mid in uu shaqeynayo aan la hubin.
Beelaha sida gaarka ah ay tirada kuraastoodu 0 ama tiro u dhow ay noqodn doonto waa Beelaha awalba dulmanaa ee 0.5 saamigooda laga dhigay. Bal hadda qiyaas meeqa Degmo ayay Guddoomiye ka yihiin dadka 0.5 loo bixiyay?
Waa mid aad arki doonto in afarta qabiil ee waaweyn uu Baarlamaanku ku koobnaado maaddaama dadka aan hubeysneyn ee lagu xaqiray caasimadda, indhaha caalamka iyo saxaafadda hortooda aan cidina u hadli doonin marka qeybiska lala tago Gobollada iyo degmooyinka ay beelaha hubeysan malliishiyadoodu ilaalineyso.
Laba qabiil oo hadda kuraas ay tiradoodu is le’eg tahay ama ay iska daba dhowdahay ay noqon doonaan in mid uu kan kale aad uga badsado kuraasta Baarlamaanka. Kaba darane waxay dhali doontaa in laba beelood oo hadda min hal Wasiir ku leh Golaha Wasiirrada ay noqon doonto in beeli ay weydo Wasiir, meesha ay beesha la hadda la simani ay ka heli doonto laba ama saddex Wasiir.
Waa mid abuuraya in Degmooyinka Somaliland badankood aan dad laga soo xuli kari doonin oo markaa Xildhibaannada Baarlamaanku ay noqdaan qaar Degmo laga soo “doortay” oo markaa iskala weyn Xildhibaanno la soo xulay oo Baarlamaanka la fadhiya.
Haddiiba ay dhacdo in Degaan wax lagu qeybsado waa in helaa damaanad ah in saamiga ay Baarlamaanka ku leeyihiin beelaha aan hubeyneyn ee 0.5 in aanuu hoos u dhici doonin.
Ugu dambeyntii talada Degmooyinku haddii ay hirgasho waxay sii fogeyn doontaa xilliga doorasho qof iyo cod ah la qaban lahaa. Waayo dadka ku fadhin doona inta badan kuraasta Baarlamaanka iyo inta badan kuraasta Golaha Wasiirradu ma rabi doonqqn in laga buriyo sadbursiga ay heleen.
Qof iyo cod ma yaqaan degmo iyo tuulo iyo qabiil, mana yaqaan 0.5 toona ee wuxuu kuraasta u badinayaa meesha ay tirada dadku ku badan tahay.